uvalo lwe-corona kwabantula amanzi ahlanzekile - Ilanga News
Home Izindaba uvalo lwe-corona kwabantula amanzi ahlanzekile
uvalo lwe-corona kwabantula amanzi ahlanzekile
UHLALELE ovalweni umphakathi wase-Mkhanyakude ngenxa yokungabi bikho kwamanzi ezindaweni eziningi ezingaphansi kwalesi sifunda, ikakhulukazi ezisemakhaya.
UMkhanyakude ungunina womasipala abane; okuyiJozini, iBig 5 Hlabisa, uMtubatuba nowa-KwaMhlabuyalingana.
Bonke labo masipala banenkinga yokungabi bikho kwamanzi oku-bhekana nenselelo yokusabalala kwegciwane i-coronavirus.
NgoMsombuluko ILANGA lihambele izindawo ezahlukene nge-nhloso yokubheka ukuthi abantu bayayilandela yini imiyalelo kahulumeni yokuhlala ngokugeza izandla.
Okuqaphelekile wukuthi iningi labantu kalikunakile lokho, ikakhulukazi okokugeza izandla, bakhala ngokuthi kawekho amanzi.
UMnu Mxolisi Gumede waseMhlekazi uthe: “Sinovalo lokuthi singase singenwe yileli gciwane ngoba kuthiwa lihamba kakhulu ezindaweni ezinokungcola. Abantu abaningi lapha emakhaya kabanazo izimoto zokulanda ama-nzi.”
UNkz Thembekile Gama waseNdumo uthe inkinga isezinganeni ngoba zona zibamba noma yini ephambi kwazo.
“Noma ngabe uyazama ukuvika wena omdala, kodwa ngeke ukwazi ukuvimba izingane. Zona kudingeka ukuba uhlale uzihlamba izandla ngaso sonke isikhathi. Siyacela ukuba umasipala wethu usibekele amathangi amanzi ukuze sizokwazi uku-bhekana nale nkinga,” kusho uNkz Gama.
Okhulumela umasipala uMkhanyakude, uMnu Mduduzi Dlamini, uthe zikhona izinhlelo okulindeleke ukuba ziqale namuhla ngoLwesine zokuhanjiswa kwamanzi ezindaweni ezithathwa njengezibucayi kakhulu kulesi sifunda.
Uthe bazokwenza lokhu ngokubambisana nomnyango wezokuBusa ngoBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal.
Uthe lo mnyango uxhase lo masipala ngamaloli azothutha amanzi ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya.
“Siyawucela umphakathi ukuba ubekezele, isixazululekile inkinga,” kusho uMnu Dlamini.
Previous articleuvule icala usomabhizinisi oqolwe “ngamaphoyisa”
Next articleUboshelwe ukubhunyela umyeni ngephalishi